🥇Ezona Akhawunti ziLawulwayo ze Forex | Isikhokelo esigcweleyo sikaDisemba ka-2021-Funda i-2 yoRhwebo
Fumana iiMpawu ze-Forex zamahhala
EYONA BHUNTI YOLAWULO LWEZABASEBENZI:
FUNDA 2 INKONZO YEENKONZO ZAMANQAKU KWI-FOREX MAM
Ukuba unomdla kurhwebo lwemali kodwa ukhathazekile malunga nenani lomsebenzi onokuthi ubandakanye - iakhawunti ye-forex ephethweyo isenokuba yile nto uyikhangelayo.
Ngaphandle koko kubhekiswa kuyo njengeakhawunti ye-MAM, oku kuyenza ukuba uzicwilise ekuthengeni nasekuthengiseni iiperi zemali, ngaphandle kokwenza ngokwakho ubuqhetseba.
Kulapho umrhwebi onolwazi angena khona. Oko kukuthi, baya kulawula utyalomali ukuze ungafuneki.
Kweli phepha, sijonga ukuba zeziphi iiakhawunti ze-forex ezilawulwayo kwaye ngakumbi ngakumbi- indlela yokufunda ngayo inkonzo ye-2 ye-MAM inokukunceda uthathe inzame zakho zokurhweba ziye kwinqanaba elilandelayo!
AvaTrade-Urhwebo ngokuzithemba kunye nesibonelelo
I-app yethu ye-AvaTradeGO ephumeleleyo
24/7 urhwebo ngeemali zedijithali
Iinkonzo ezininzi zabathengi ezixhaphakileyo
Ummiselo kuyo yonke imimandla emi-6
Ukubhalisa kwi-MAM (kuMphathi weAkhawunti ezininzi)
Funda i-2 yoRhwebo lwe-MAM ichaziwe
Uyivula njani iAkhawunti ye-MAM
Ubuncinci beMAM yoTyalo mali
Imirhumo kunye nesiVumelwano seZabelo
Yintoni iAkhawunti eLawulwayo ye-Forex?
Zisebenza njani iiAkhawunti ze-Forex?
Ukulawulwa kweAkhawunti ye-Forex nge-Intanethi kwi-Intanethi
Ingxelo eLawulwa ziNgcali
Ukulawulwa kweAkhawunti ye-Forex: Umzekelo
Iindidi zeeAkhawunti ze-Forex ezilawulwayo
Ukulawulwa kweeAkhawunti ze-Forex: Iiposta
Ukutyala imali ngokudlulileyo kulo naliphi na inqanaba lobuchule
Alikho ixesha lokuThengisa? Akukho ngxaki
Utywala lwe Forex
Ii-Akhawunti ze-Forex eziPhezulu eziPhezulu ze-2021
Ukulawulwa kweAkhawunti ye-Forex: Iingozi
Ukuthatha isigqibo kwiAkhawunti ye-Forex elawulwayo
Iintlobo zeAkhawunti ezilawulwayo
Kufuneka utyalomali oluncinci
Ipesenti Yesabelo Sengeniso
Ukurhoxa kwi-T & Cs
Yintoni i-Learn 2 Trade forex MAM?
Yimalini ukufunda iminyaka emi-2 yeenkonzo ze-MAM?
Lithini elona xesha lincinci lotyalo-mali lwe-MAM?
Zithini izibini ze-Forex ezijolise ekufundeni i-2 ye-MAM ekujolise kuyo?
Ngowuphi umrhwebi we-Learn 2 Trade MAM obhalise kunye naye?
Ubuncinci bediphozithi yokujoyina i-MAM yi- $ 5,000.00
Ukubhalisa iakhawunti usebenzisa le khonkco: https://www.avatrade.com/visit/avatrade-mam
Le akhawunti eyahlukileyo iyafuneka ukuba sele unayo iAvatrade yokujoyina i-MAM.
Gcwalisa iinkcukacha zakho kwaye ungeze ikhowudi yeqabane: 110448
Khetha: iMetatrader 4
Ngenisa isazisi sakho kunye nebhili yokusetyenziswa + kobungqina befom yegqwetha egcwalisiweyo.
Ngasekhohlo uza kubona ithebhu yokufaka amaxwebhu kwideshibhodi kwiAvatrade.
Nceda wazise [imeyile ikhuselwe] ukuba oku kungasentla kugqityiwe ngeyakho
Inombolo yeakhawunti ye-Metatrader 4 kunye negama lakho lomsebenzisi kwi-akhawunti okt Idilesi ye-imeyile kunye negama lakho elipheleleyo kuphela xa iakhawunti yakho yeAvatrade iQINISEKISWE ngokupheleleyo!
qhagamshela kwiakhawunti yethu ye-MAM
Thina kwi-Learn 2 Trade siyazingca ukwazisa ukuba ngoku sinenkonzo epheleleyo ye-MAM esebenzayo. Ukubeka ngokulula, oku kukuvumela ukuba usebenzise ngokupheleleyo iqela lethu labarhwebi be-forex abangaphakathi endlwini kwi-100% yemeko yokuhamba.
Oko kukuthi, ngokukhetha ukufaka inkunzi kwi-Learn 2 Trade MAM service nge-AvaTrade - ungasebenza ngokurhweba ngemini ye-forex ngaphandle kokufuna ukuphakamisa umnwe. Endaweni yokuba naziphi na iinzuzo esizenzayo ziya kubonakala ngokungathanga ngqo kwiakhawunti yakho.
Kula macandelo angezantsi sigubungela i-ins kunye nokuphuma kwendlela ezisebenza ngayo iiakhawunti zethu ze-MAM ze-MAM ukuze ukwazi ukuthatha isigqibo sokuba inkonzo iyazifezekisa na iinjongo zakho zezemali.
Iakhawunti # 1
Iakhawunti # 2
Iakhawunti # 3
Okokuqala nokuphambili - sivumele ukuba sichaze indlela iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlwini abangena ngayo kwintengiso ye-forex. Ngamafutshane, abathengisi bethu banamava eminyaka phakathi kwabo-okuthetha ukuba banokuqonda okuqinisekileyo kohlalutyo lobuchwephesha.
Kananjalo, iqela lethu liza kuhambisa izikhombisi ezahlukeneyo zobugcisa ngalo lonke usuku lokuthengisa ukuskena kunye nophando lwezibini ezithile zangaphambili. Oku kubandakanya yonke into ukusuka kwi-RSI, Ukuhambisa iAverage, kunye neBollinger Bands ukuya kwiAroon Oscillator, MACD, nakwiOn-Balance-Volume.
Ngokwesicwangciso-qhinga-abathengisi bethu bajolise ikakhulu kwizikhundla zorhwebo losuku-okuthetha ukuba sijonge ukungena nokuphuma kwintengiso kwiiyure ezimbalwa. Ngamanye amaxesha, ukuba sibona imeko yexesha elide ekwenziweni, sinokukhetha ukwenza isicwangciso sokurhweba.
Iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlini nabo banolwazi oluninzi malunga neendlela zokukhwela. Oku kuyakuqala ukusebenza xa sizazisa ukuba isibini sihleli kwisithuba sokudibanisa- emva koko sisivumela ukuba singene kwizikhundla ezinobungozi obude lo gama imeko ihleli nje.
Ngokubalulekileyo, abathengisi bethu baya kuhlala benesicwangciso sokungena kunye nokuphuma kwindawo yolawulo lomngcipheko. Oku kuthetha ukubeka iinjongo ezicacileyo kwisikhundla ngasinye ngokuthumela ukulahleka kokuyeka kunye nemiyalelo yokuthatha inzuzo.
Inkqubo yotyalo-mali kwiakhawunti ye-Learn 2 Trade MAM icacile.
Ukuhamba ngendlela eneenkcukacha - nceda uskrolele ukuya kweli candelo lingentla 'Ukubhalisa kwi-MAM (kuMphathi weAkhawunti ezininzi)'.
Ukuze uxhamle kwinkonzo yethu ye-MAM nge-AvaTrade, ubuncinci botyalo-mali olufunekayo yi- $ 5,000. Oku kunengqiqo kakhulu xa ucinga ukuba umndilili wecandelo ungaphezulu kwe- $ 10,000.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba inkunzi yakho ikhuselekile kwi-AvaTrade. Ngokusesikweni, le ndawo i-brokerage inexabiso eliphezulu ilawulwa kwimimandla emithandathu kwaye igunyazisiwe ukuba isebenze kumazwe angaphezu kwe-100. Kananjalo, i-AvaTrade iyacelwa ukuba ilandele inani lemithetho esisiseko ejikeleze ukhuseleko lwabathengi, ukuchasana nokuchithwa kwemali, kunye neeakhawunti zebhanki ezahluliweyo. -
Thina kuFunda u-2 Urhwebo ligqibe ekubeni liphumeze inkqubo yokwabelana ngenzuzo kwinkonzo yethu ye-MAM ye-forex. Oku kubalulekile, njengoko kuqinisekisa ukuba iqela lethu labarhwebi alikhuthazwa kuphela ekwenzeni imali eninzi kangangoko kunokwenzeka - kodwa ukwenza oko ngendlela enobungozi.
Sikhethe inkqubo yezabelo ezingama-70/30 - okuthetha ukuba i-70% yeenzuzo zigcinwe nguwe kwaye i-30% eseleyo ihlawuliswa njengekhomishini yi-Learn 2 Trade.
Masicinge ukuba utyale imali eyi- $ 5,000 kwinkonzo ye-Learn 2 Trade MAM
Ekupheleni kwenyanga 1-abathengisi bethu bavelisa imbuyekezo ye-5%
Kwimali eyimali eyi- $ 5,000- eguqulela kwinzuzo yokuphela kwenyanga eyi- $ 250
Kweli nani, uya kugcina i-175 yeedola, ngelixa u-2 urhwebo uza kwenza ikhomishini ye- $ 75
Kananjalo, ibhalansi yakho yokuphela kwenyanga inokuma kwi- $ 5,175
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba njengazo zonke iinkonzo ze-MAM zakwangoko-sikwabiza i-2% yemirhumo yonyaka yokugcinwa. Oku kusekwe kwimalini yemali etyalwe kule nkonzo.
UMam umele 'uMphathi wee-Akhawunti ezininzi'. Njengoko igama libonisa, iakhawunti yeMam ikunceda ekulawuleni iiakhawunti ezininzi ukurhweba kunye notyalo-mali, zonke zisebenzisa iqonga elinye.
Isichazi esithi 'uLwabiwo loLwabiwo lweModyuli', sisichazi sePamm (esixoxwe ngezantsi) ngenxa yokuba singasebenzi ngokusekwe kubungakanani beakhawunti yomtyali mali ngamnye.
Ngalo lonke ixesha umkhombe uthenga inani eliqhelekileyo lemali, zonke iiakhawunti zabaxhasi zandiswa ngeqashiso eliqhelekileyo. Zihlala zithathwa njengezona zifanelekileyo kubatyali zimali abathengisa ngesixa esikhulu semali.
Kwimeko apho umtyali-mali enepotifoliyo enkulu kakhulu kunomphathi ochaphazelekayo, oku akunakusebenza kakuhle. Ngelixa umphathi kunye nomthengi benobungakanani obulinganayo botyalo-mali, inkqubo iluncedo kakhulu.
Emele 'iModyuli yoLawulo loLwabiwo lweepesenti', le akhawunti ye-forex ephethwe yahlukile kwezinye ezimbini esele sizikhankanyile. Kungenxa yokuba ngePamms uyakwazi ukunikezela ipesenti yenkunzi yakho ukuze ukwazi ukukopa ukurhweba kwiakhawunti ephambili.
Njengotyalomali usebenzisa olu hlobo lweakhawunti elawulwayo, uyakwazi ukusebenzisa iiakhawunti ezininzi ukunika iipesenti ezahlukeneyo kwinkqubo nganye yorhwebo, ngaloo ndlela uphambanisa imali yakho eyinkunzi
Abaphathi bemali bayayithanda le nkqubo enkosi kwisixa esikhulu seenketho ezikhoyo. Iimeko zotyalo-mali zithathwa njengeziguqukayo kuba abarhwebi banokuseta ixesha lokurhweba, inani lekhomishini, kunye nexesha lokudlulisa ukuthanda kwabo.
Abatyalomali bayayithanda inketho yePamm kuba kukho uluhlu olukhulu lwabaphathi abaziingcali ezikhoyo. I-Pamm ikunika ulawulo oluthe kratya kutyalo-mali lwakho, kuba ungalubeka esweni urhwebo lwakho. Uyakwazi kwakhona ukutyumba okanye ukutshintsha abathengisi kuluhlu lwakho olukhethiweyo lwabatyali mali, kunye nokusetha amanqanaba okutsala avumelekileyo.
Xa abarhwebi bekhangela amathuba otyalo mali bahlala bethathela ingqalelo umngcipheko obandakanyekayo. Esinye sezizathu zokulawulwa kweakhawunti ye-forex ithandwa kakhulu kungenxa yokuba umngcipheko wendalo kunye notyalo-mali zithathwa njengeziphantsi, zinembuyekezo enkulu.
Nazi ezinye zezona zibhengezo zibalaseleyo malunga notyalo mali ngeakhawunti ye-forex ephethwe:
Njengoko sichukumisile, iiakhawunti ze-forex ezilawulwayo ziyaguquguquka ngokwenene kubatyali mali. Ayinamsebenzi nokuba intengiso iyanyusa okanye ayinyani. Iiakhawunti ezilawulwayo ze-forex zihlala zifumana indlela yokwenza inzuzo ekugqibeleni.
Esona sizathu siphambili sokuba abantu abaninzi bathathe isigqibo sokutyala imali kwi-forex kukuvelisa inzuzo. Kananjalo, ngotyalo-mali oluchanekileyo, unokwenza imbuyekezo enkulu.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele kakhulu ngaphambi kokuzibophelela kulo naluphi na utyalomali. Kungenxa yoko le nto iiakhawunti ze-forex ezilawulwayo zithathwa njengelona thuba lokwenza inzuzo.
Kancinci njenge- $ 5k ungenza inzuzo ukuya kuthi ga kwi-20% inyanga nenyanga. Ukuba ufuna imbuyekezo engakumbi unokuhlala utyala enye imali. Abanye abatyali mali baxela ukwenza imbuyekezo ephezulu njenge 65% - 100% yotyalo mali lwakho lokuqala.
Awona maqonga ahloniphekileyo anika abathengi iziphumo eziguquguqukayo, oko kuthetha ukuba uyakwazi ukuqinisekisa iziphumo zomrhwebi. Inye kuphela into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule nangona uhlala uqinisekisa ukuba iqonga lichaza ngokufanelekileyo imbuyekezo yalo.
Akuqhelekile ukuba kucetyiswe ukuba uqale urhwebe i-forex ukuba umtsha kwimeko. Emva kwayo yonke loo nto, awungekhe ufune ukubeka emngciphekweni ukuba ukungabi namava kukuchithe isahlulo esikhulu sengxowa-mali yakho yotyalo-mali kwintengiso eguqukayo.
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga neakhawunti ye-forex ephethwe kukuba ngaphandle kwamava angaphambili, uyakwazi ukurhweba ngezezimali. Kwangelo xesha, ungabusebenzisa ngokupheleleyo ubuchule kunye namava omrhwebi we-forex onamava.
Inyaniso yokuba iiakhawunti ze-forex ezilawulwayo ziyindlela nje yokutyala imali ayisiyomtsalane kuphela kubathengisi be-forex, kodwa nakubantu abangenalo ixesha lokulawula iinzame zabo zokurhweba.
Ukurhweba nge-forex kufuna ixesha elininzi kunye nokuzinikezela. Kananjalo, ubuhle beeakhawunti ezilawulwayo kukuba unokukhuseleka kulwazi lokuba nokuba uxakekile uqhubeka nobomi-iakhawunti yakho yorhwebo ilawulwa yingcali kuloo ntsimi.
Njengoko besitshilo, ngokwendalo kukho umngcipheko omncinci ochaphazelekayo kurhwebo lwe-forex ngesiseko se-DIY. Ukurhweba ngeakhawunti ye-forex ephethwe kukunika ukufikelela kuluhlu olwahlukileyo lwee-asethi kuphela- kodwa ulwazi kunye izicwangciso zorhwebo. Ngokubalulekileyo, awudingi ukuba yingcali ye-forex yokutyala imali.
Abarhwebi ababalaseleyo kunye nabarhwebi baya kuba nezikhokelo zolawulo lomngcipheko ekufuneka zilandelwe kwaye baya kusebenzisa imida yokuhla. Ngokubanzi, kuya kufuneka ulindele umngcipheko ongekho ngaphezulu kwe-2-3% kutyalo-mali lwakho ngokubanzi kurhwebo olunye.
Ukuba uneakhawunti enkulu yotyalo-mali, ke umngcipheko othathwe ngumrhwebi kungenzeka ukuba ube sezantsi kakhulu. Umzekelo woku iya kuba ukuba uqala iakhawunti yakho elawulwayo ye-forex ngokuqina usebenzisa i-20% umda wokuhla. Nokuba oku kunokuba nzima kakhulu ukuphatha. Ngale nto ithethwayo, bambelela kubaboneleli ngeakhawunti ye-forex enikezela 'ukhuseleko lwebhalansi'.
Kukho ukungaqondi okuqhelekileyo phakathi kwabatyali mali abalawula iiakhawunti zorhwebo lwe-forex ezonakalisa ukhuseleko kunye nokukhuseleka kweeakhawunti zabo. Isizathu sokuba abantu bakholelwe koku kukuba umphathi wemali othengisa iakhawunti uya kuba nakho ukufikelela kwezo nkcukacha.
Inyani yile, unolawulo olupheleleyo kwiakhawunti yakho. Umphathi wemali uvunyelwe kuphela ukusebenzisa iakhawunti yakho ukuze ufumane imali ngenjongo yokuthengisa. Ukucaca, umphathi wakho wemali akavumelekanga ukuba akhuphe imali kwiakhawunti yakho.
Unegunya kunye nolawulo lokuvala iakhawunti yakho kwaye urhoxise utyalomali lwakho ukuba awonwabanga. Kodwa, umbono ngokubanzi ngeakhawunti ye-forex ephethweyo kukuthathela ingqalelo njengethuba lotyalo-mali lwexesha elide.
Ke nangona uninzi lwababoneleli lukwenza ukuba ukwazi ukukhupha imali yakho ngokukhawuleza xa uthanda- ukuba unako, zama ukunamathela kuyo.
I-Forex ihlala ithathwa njenge-immune kwi-manipulation, ngokungafaniyo nekamva kunye neemarike zesitokhwe ezisebenzisa iindlela zendlela yokusebenza. I-Forex, kwelinye icala, inentengiso echazwe njengabelwe amagunya, ngaphandle kwexabiso elinye.
Abatyalomali kwihlabathi liphela basebenzisa iiakhawunti ze-forex ezilawulwayo ezinkulu ngenxa yobume bemeko yentengiso - ngaphezulu kokungazibekeli indawo yokuthenga okanye yokuthengisa iiodolo.
Ngeeakhawunti ze-forex ezilawulwayo, uyakwazi ukurhoxisa utyalomali lwakho njengoko ubona kufanelekile. Ngokungafaniyo notyalo-mali lweshishini okanye ukuqeshisa ngepropathi- awunyanzelekanga ukuba ulinde de kufike eyona nto intle kwaye uthengise izabelo zakho okanye ipropathi ukuze ubone inzuzo.
Ukuba yonke le ntetho yeeakhawunti ze-forex ezilawulwayo ikwenza ukuba ufune ukubambeka ngokukhawuleza -kwaye sidwelise amaqonga ethu aphezulu aphakamileyo ka-2021 apha ngezantsi.
Apho kungekho ziqinisekiso, kukho umngcipheko. Ke ngoku, ngokutyala imali usebenzisa iakhawunti ye-forex ephethwe kwaye uxhomekeke kumrhwebi onamava ukwenza ibhidi yakho, oku akuthethi ukuba uqinisekisiwe ngeveki enkulu, inyanga okanye unyaka kwintengiso.
Ukuba nomrhwebi onamava emva kwakho usakubeka endaweni elungileyo ukuze ufumane iziphumo ezilungileyo kuyo nayiphi na imeko. Kwaye eyona nto intle onokuyenza kukungqinelana nokuba yeyiphi na imingcipheko, njengazo naziphi na iindlela zokurhweba.
Abahlomli bezentengiso baqaphela ukuba enye yeendlela zokunciphisa umngcipheko obandakanyekayo kukwahlula utyalo-mali lwakho. Indlela entle yokwenza oku kukukopa abambalwa abathengisi bekopi kwiqonga le-eToro.
Umzekelo, kuba unokukopa urhwebo nge-200 yeedola, oko kuthetha ukuba ukuba ufuna kuwe ungatyala imali eyi- $ 2k kwaye uzifake kwiqela elikhulu labathengisi abali-10 abanamava.
Yindlela elungileyo yokungafaki onke amaqanda akho kwibhasikithi enye. Awuyi kuziva imiphumo yeseshoni enye embi njengoko ungathanda ukuba umthengisi omnye angayikopa.
Nje ngokwenza uphando olulula lwe-intanethi, uya kubona ukuba kukho imfumba ngokupheleleyo yeeakhawunti ze-forex ezilawulwayo onokukhetha kuzo.
Nazi ezinye izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ukhangela iqonga leakhawunti efanelekileyo ye-forex yakho.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukucinga ukuba loluphi uhlobo lweakhawunti ye-forex ephethwe ofuna ukuyivula. Ukuba uhlala kulawulo ngelixa usakha ngokwahluka kwepotifoliyo yakho yotyalo-mali yile nto uyifunayo-ke sicebisa iqonga elifana ne-eToro.
Kwelinye icala elichasene nengqekembe, ukuba ufuna inkqubo ezenzekelayo ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni - iFX Mac inokuba liqonga lakho. Akunyanzelekanga ukuba uhlolisise abathengisi ngokwakho. Endaweni yoko, bayenzela wena kwaye bakhathalele yonke into ukusukela ngelo xesha ukuya phambili.
Kubalulekile ukuba ukwazi ukukhangela ukuba ulwazi olunikezwe lona luchanekile xa kuziwa kwimbuyekezo echaziweyo. Ukuba umrhwebi uthe benze imbuyekezo efikelela kumanani ama-3 okanye ama-4, oko akuthethi ukuba kuyinyani.
Kungenxa yesi sizathu le nto sicebisa ukuba ukhethe amaqonga anokuvumela ukuba uqinisekise ngokobuqu naziphi na iziphumo ezibonelelwe ngumrhwebi wakho omkhethileyo.
Sincoma ukuzama iakhawunti yasimahla yedemo, okanye ubuncinci kuvavanyo ukuze ukwazi ukuziva ngeqonga. Okona kubaluleke kakhulu, kuya kufuneka usoloko ukhetha iqonga elinelayisensi epheleleyo nelawulwayo. Yindlela kuphela yokufumana ukuthembakala.
Njengoko ubona, kukho umahluko omkhulu xa kuziwa kwiimfuno zobuncinci zotyalo-mali ezivela kubanikezeli beakhawunti ye-forex. Amaqonga anjengeFX Pig aya kukuvumela ukuba uqale ukusuka kwi- $ 500 encinci, ngelixa iiMarket zamagama imali encinci iphakame kakhulu kwi- $ 5,000.
Umzekelo, ukuba unqwenela ukuqala encinci, sicebisa ukuba ukhethe umboneleli onotyalo-mali oluncinci ukugcina uhlahlo-lwabiwo mali lwakho.
Beka ingcinga malunga nendlela ongathanda ukuyihlawula ngayo utyalo-mali lwakho ngaphambi kokuba uqhutywe xa ukhetha umboneleli weakhawunti yakho ye-forex ephethwe.
Uninzi lwamaqonga eakhawunti ye-forex ikwenza ukuba usebenzise iindlela eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuhlawula ezinje ngeMastercard kunye neVisa. Oku kuthetha ukuba imali yakho kufuneka idluliselwe phantse kwangoko.
I-eToro yaziwa ngokuba neendlela ezahlukeneyo zokuhlawula ezifumanekayo kubasebenzisi kwaye ixhasa ii-wallets ezinje ngeSkrill, iNeteller kunye nePaypal. I-E-wallets zihlala zivumela iidiphozithi ezikhawulezayo kunye nokurhoxa kuneendlela zesiko.
Ngaphandle kwamaqonga afana ne-eToro, kuya kufuneka uhlawule iifizi zekhomishini xa utyala imali ngeakhawunti ye-forex ephethwe. Ipesenti yentlawulo yekhomishini yahlukile kumgama obanzi. Ezi zabelo zengeniso zinokubakho naphi na phakathi kwe-10% ukuya kuthi ga kwi-50%.
Bathi ufumana oko uhlawulayo, ke uya kuhlala uqaphela ukuba abarhwebi abanamava badla ngokuza nezinga eliphezulu lekhomishini.
Kodwa ungavumeli uloyiko lwamaxabiso ekhomishini lukukhokelele ekubeni ukhethe umrhwebi onexabiso eliphantsi. Emva kwayo yonke loo nto, ezinye izinto ebomini zixabisa umrhumo ophakamileyo. Kungenxa yoko iihotele zilinganiswe ngeenkwenkwezi, kwaye ezona zibiza kakhulu zibiza kakhulu.
Kuya kufuneka ujonge imigaqo kunye neemeko ezibaluleke kakhulu zeqonga leakhawunti elilawulwa ngaphambili ngaphambi kwalo naluphi na ukuzibophelela.
Kuya kufuneka ujonge kwimigqaliselo yokurhoxa kwaye ukuqonde ngokwenene okulindeleke kuwe. Unokubona ukuba umboneleli othile weakhawunti ye-forex unexesha elincinci lokuhlawulwa '. Oku kuthetha ukuba awunakuchukumisa utyalo-mali lwakho de kudlule ixesha elimiselweyo.
Zama ukunika aba banikezeli indawo ebanzi. Ngobunzima, kungafika ixesha ebomini bakho xa ufuna imali yakho yotyalo-mali ngokukhawuleza kwaye eli xesha lokuhlenga linokukuqhekezisela izinto.
Konke kuzo zonke, kufuneka kuthiwe ii-akhawunti ze-forex ezilawulwayo zilungile kuluhlu lwabatyali mali. Oku kunjalo ngakumbi ukuba unqwenela ukurhweba ngeemarike ze-forex ngendlela exakekileyo.
Ngokuvumela umrhwebi onamava we-forex ukuba athenge kwaye athengise egameni lakho, uyafumana ukufikelela kwindawo enkulu yezemali ngaphandle kokuchitha iiyure uphanda kwaye ufunda iitshathi.
Kufanelekile ukukhumbula ukuba ngenxa yokuba umrhwebi ozikhetheleyo enguthile, oko akuthethi ukuba uqinisekisiwe ngazo naziphi na iinzuzo ezinkulu. Kodwa ikunika ithuba elingcono kakhulu lokuphumelela.
Kunyanzelekile ukuba uqiniseke ukuba wenza uphando kumnikezeli weakhawunti ye-forex oyikhethileyo. Oku kubandakanya ukuqinisekisa ukuba banamaphepha-mvume afanelekileyo kwaye alawulwa ngokupheleleyo ngamaqumrhu afanelekileyo.
Ungaqala ngeFund 2 yoRhwebo nge-MAM okwangoku ngokunqakraza kwikhonkco elingezantsi!
Joyina i-Avatrade Trade kunye nokuzithemba
Faka idiphozithi engama-250 ukuze ufumane iVIP yasimahla
Iimpawu ze-Forex zoNyaka o-1!
Ngolingo lwamahhala lweentsuku ezisi-7 awunaso kwaphela isizathu sokuba ungazami. Awuyi kuzisola.
Vula iakhawunti ngeAvaTrade
Iiakhawunti ze forex ezilawulwayo zikwenza ukuba ukwazi ukutyala imali ngokusebenzisa umthengisi we forex onobuchule. Lo mrhwebi akazukubonelela kuphela ngokufikelela kwimarike yezigidi zeedola, kodwa uya kukubeka emarikeni. Oku ayikukugcinela kuphela umlenze omninzi, ungasathethi ke ngophando kunye nokucwangciswa- kodwa kuya kukugcinela ixesha elininzi noxinzelelo.
Ukuba ungumqali kurhwebo lwe-forex ke esi sesona sizathu sokukhetha iakhawunti ye-forex ephethwe. Ukufunda iimakethi zezemali kungathatha iminyaka ukugqibelela, uthini ngalo lonke uhlalutyo lobuchwephesha, izibalo kunye neetshathi zamaxabiso ezineenkcukacha ukwenza ingqiqo.
Iakhawunti ye-forex ephethwe ikukhawulezisa kwilizwe lokurhweba kwangaphambili ngaphandle kokuba wenze lukhulu konke konke. Awudingi kuba nexhala ngokubeka amashishini okanye ixesha lokuthengisa - konke ekufuneka ukwenzile kukubeka ubuncinci bexabiso lotyalo-mali njengoko kuchaziwe kumthengisi wakho. Ngoku konke okufuneka ukhathazeke kukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi umrhwebi oza kukhetha ukwenza ibhidi yakho.
Umrhwebi uya kuthi, ewe, afune ukusikwa. Emva kwayo yonke loo nto, ngumsebenzi wabo onzima kunye nokuseta izakhono ezikunceda ukuba ufumane ezo nzuzo. Ipesenti iya kwahluka kumrhwebi, kwaye sifumanise ukuba xa sithetha ngokubanzi, izakuba phakathi kwe-10% kunye ne-50%.
Xa kuziwa kurhwebo lwe-forex, okanye njengakwenyani nakuphi na ukurhweba - akukho ziqinisekiso. Akukho nto ingenabungozi. Unokufumana umrhwebi onobuchule onamava eminyaka ohlawulisa umrhumo omkhulu wekhomishini. Ngale nto ithethwayo, ukuhlawula iipesenti ezingama-40 endaweni ye-10% kumrhwebi onamava kancinci akunakuqinisekisa ngeenzuzo ezingaphezulu.
Iwebhu kwihlabathi liphela ichitheka ngamaqonga ama-broker anikezela ngeakhawunti ye-forex ephethwe, kwaye ke uya kuqaphela ukuba uninzi lwazo luthembisa iziphumo ezintle. Ngelixa siqonda ukuba kubalulekile ukuzithemba kwizinto 'abazithengisayo' ukuze sithethe, inyani yento kukuba kunqabile ukuba kubekho ubungqina obuvela kula maqonga okububuyisela.
Akunjalo nje ukuba ukuthengisa kusebenza njani, kwaye akukho mntu unebhola yekristal. Khangela ubuchule, udumo kunye neziphumo ngazo zonke iindlela. Kodwa, thabatha izithembiso zokuphumelela ngobusuku obuninzi kunye netyuwa encinci ngenxa yesipaji sakho.
Inkqubo echanekileyo yotyalo-mali iyahluka ukusuka kwisiza ukuya kwisiza. Kodwa, ngokuthetha ngokubanzi, amanyathelo okuseta iakhawunti ayafana.
Gcina imali ethile kumrhwebi
Umrhwebi uya kuthengela kwaye athengisele iiasethi kuwe.
Ukuba umrhwebi akenzeli nzuzo kuwe, abayithathi imali.
Xa umrhwebi eyenzela inzuzo, kulapho ke kuya kuthi kuthathwe iipesenti ezichazwe kwangaphambili.
Zimbini iindlela onokuthi uqale ngazo ngeakhawunti ye-forex ephethwe. Olunye ukhetho kukuvula iakhawunti ephethwe ngenkampani yebroker, enye indlela kukudlula kwiqela lesithathu.
Ngamanye amaxesha, abathengisi be forex bakunika ukufikelela kwiiakhawunti ezilawulwayo. Oku kuhlala kugxile kwisivumelwano sokuthengisa ikopi. Isivumelwano sokuthengisa ikopi yinto ethile ekuvumela ukuba ukhethe umrhwebi omthandayo. Uya kuthi emva koko ukope iphothifoliyo yabo njengokuthanda.
Ke, nakuphi na ukuthengwa okanye ukuthengisa iiodolo ezenziwa ngulo mrhwebi ziya kuboniswa kwipotifoliyo yakho (ngokuhambelana notyalo-mali lwakho). Ngale nto engqondweni-xa ujonge iakhawunti ye-forex ephethwe, enye yezona ndlela zigqibeleleyo kunye nezilungelelanisiweyo kufuneka ibe yintengiso yekopi.
Iqonga elifana ne-eToro likwenza ukuba ujonge kwi-metric nganye yepotifoliyo yomtyali mali ngamnye. Ukusuka koku, uza kuba nombono olungileyo wokuba yeyiphi na impahla asethi ajolise kuyo umtyali-mali kunye nembuyekezo yanyanga-mali kutyalo-mali, kunye nesimbo sotyalo-mali ngokubanzi.
Konke okufuneka ukwenze ukuze uqale ukuvula iakhawunti kunye nomthengisi omkhethileyo. Nje ukuba iakhawunti yakho iqinisekiswe ukuba kufuneka ubeke imali, yenza umsebenzi wesikolo, kwaye uthathe isigqibo sokuba ngabaphi abatyali mali ongathanda ukukopa ukuthanda kwabo. Yonke le nkqubo ayenzi nto ukusuka kweli nqanaba ukuya phambili.
Abanye abantu abanomdla wokukopa umsebenzi womnye umrhwebi. Kule meko, kuhlala kukho iakhawunti ye-forex ephethwe yingcali. Ukuhla ngale ndlela, kuya kufuneka ubhalise kwifemu yearhente ye-intanethi enikezela ngeakhawunti ezikhethekileyo ze-forex. Uya kudinga ukufaka ubuncinci ubuncinci bemali ekulindeleke ukuba uyityale.
Ngelixa amanye amaqonga wabarhwebi enza ukuba ukhethe umrhwebi wakho ngokusekwe kwiinjongo zakho zotyalo-mali, kwiimeko ezininzi, umrhwebi uza kukhetha umrhwebi abacinga ukuba ufanelekile kwiimfuno zakho.
Amanye amaqonga asebenzisa i-AI (Intelligence Artificial) kunye 'nokufunda ngomatshini', eyamkela ngokuzenzekelayo kwaye ifunde iipateni kwiiseti zedatha enkulu. Ngamanye amagama, ukufunda ngomatshini yialgorithm. Ke endaweni yomrhwebi ongumntu, utyalomali lwakho luya kwenziwa yiAlgo Trading Bot.
Okwangoku, kuya kufuneka ubenolwazi olululo malunga nendlela ezisebenza ngayo iiakhawunti ze-forex, ke ngoku lixesha lokuba ujonge ukuba inzuzo kunye nelahleko zihlala zisebenza njani kolu hlobo lweakhawunti.
Imizekelo esiyisebenzisile apha ngezantsi isekwe kumanani theoretiki. Kodwa, basamele indlela yenkqubo yotyalo-mali ehamba ngayo xa urhweba usebenzisa iakhawunti ye-forex ephethwe kwilizwe lokwenyani.
01. Masithi utyale imali eyi- $ 20,000 kwiqonga leakhawunti elilawulwa yingcali
02. Ngoku elo qonga likwabela umrhwebi onamava osebenzisa urhwebo lokujija kwisicwangciso sakhe sokurhweba. Intlawulo yakho yekhomishini kuyo nayiphi na inzuzo yi-15%
03. Ekupheleni kwenyanga yokuqala, umrhwebi uzuza nge-20%. Kutyalo-mali lwakho lwama- $ 20,000 oku kulingana nenzuzo ye- $ 4,000 ($ 20,000 x 20% = $ 4,000).
04. Emva koko, umrhwebi uthatha ikhomishini yakhe ekuvunyelwene ngayo ye-15%, efikelela kwi-600 yeedola ($ 4,000 x 15% = $ 600)
05. Ukuphela kwenyanga kwinzuzo kule meko kufikelela kwi-3,400 yeedola. Kananjalo, iphothifoliyo yakho ngoku ixabisa i-23,400 yeedola.
Ngoku, masithi inyanga ezimbini khange zihambe kakuhle njengenyanga yokuqala. Kwakhona konke oku kuyingcinga.
01. Ekupheleni kwenyanga ezimbini, masithi umrhwebi wenza ilahleko ye-15%.
02. Ngenxa yokuba ipotifoliyo yakho yayixabisa i-23,400 yeedola ukuphela kwenyanga yokuqala, oku kuthetha ukuba ulahlekelwe yi- $ 3,510.
03. Ngenxa yokuba umrhwebi wenze ilahleko kule nyanga, abafumani khomishini.
04. Iphothifoliyo yakho kule meko ngoku ixabisa i-19,890 yeedola.
Njengayo nantoni na, kuhlala kukho amahla ndinyuka, kwaye ungabona ngokucacileyo kulo mzekelo ukuba unokutshintsha inyanga nenyanga. Ngelixa kwelinye icala, kulungile kuba akukho ntlawulo yekhomishini isebenzayo kuhambo olunempumelelo engaphantsi. Kwelinye icala, oku kuthetha ukuba utyalomali lwakho luzakuhla ngexabiso.
Ukubeka ngokulula, iakhawunti yokufunda ye-MAM 2 yezoRhwebo ikuvumela ukuba uthengise i-forex ngendlela engenzi nto. Kungenxa yokuba uyakutyala ngokungangqalanga kwiqela lethu labarhwebi- ke nayiphi na inzuzo esiyenzayo ibonakaliswa kwiakhawunti yakho. Kananjalo, unokuhlala phantsi kwaye urhwebe nge-forex ngaphandle kokufuna ukwenza nawuphi na umsebenzi onzima!
Siphambili kakhulu xa kuziwa kwimirhumo. Kuqala, sihlawulisa umrhumo womgangatho wolondolozo wonyaka we-2% - esekwe kwinani lemali otyalomali kwi-MAM. Okwesibini, kukuqinisekisa ukuba abathengisi bethu abangaphakathi ezindlini bayakhuthazeka ukuze bandise inzuzo yemali - sikwasebenzisa inkqubo yokwahlulahlula inzuzo. Oku kusebenza kuma-70 / 30- okuthetha ukuba iipesenti ezingama-70 zenzuzo zigcinwe nguwe.
Ukuqala ngenkonzo yokufunda ye-2 ye-MAM, kuyakufuneka uhlangane notyalo-mali oluncinci lwe- $ 5,000. Oku kungaphantsi kobuncinci bomgangatho oyi- $ 10,000.
Iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlwini liguquguqukayo xa kuziwa kwiimarike ezithengisekayo. Kwiimeko ezininzi, sigxila kwizibini eziphambili ezifana ne-EUR / USD kunye ne-GBP / USD. Ngale nto ithethwayo, sigcina iso elibukhali kwiimali ezikhulayo- ngakumbi xa kufikwa kuphuhliso lweendaba eziphambili.
Iakhawunti yokufunda ye-MAM 2 yoRhwebo iyafumaneka kumthengisi we-forex othembekileyo i-AvaTrade. Eli qonga liphezulu linikezela ngeemarike ze-forex, alihlawulisi nayiphi na ikhomishini, kwaye ilawulwa yimimandla.
Kukho ii-akhawunti ze-forex ezilawulwayo ezinikezelwa ngabarhwebi be-intanethi. Nangona iinkqubo zikaMam, uPamm kunye neLamm zonke zivakala ngokufanayo, ngokuqinisekileyo kukho umahluko obonakalayo phakathi kwezi nkqubo zorhwebo.
Ngaphambi kokuvula iakhawunti ye-forex ephethwe, kuhlala kucetyiswa ukuba wenze uphando kuqala. Izinto ezibaluleke kakhulu ukuba uqaphele ziiyantlukwano ezithile phakathi kwenkqubo nganye yorhwebo, kunye nokuqinisekisa ukuba izakulungela wena buqu ..
Emva kwayo yonke loo nto, yintoni esebenzayo omnye umtyali mali, isenokungasebenzi komnye. Ukuyikhumbula loo nto, siza kukunceda wahlule phakathi kweenkqubo ezithathu zokulawula imali kwaye uchaze kancinci malunga nenye nganye.
Funda iNqaku elipheleleyo
Ukuhlaziywa kokugqibela: Matshi 31, 2021
USamantha ngumphandi kunye nombhali wase-UK ojolise kuzo zonke izinto zezemali. Oku kugubungela yonke into ukusuka kubulungisa bendabuko kunye notyalo mali, ukuya kurhwebo lwe-forex kunye neCFD. USamantha ubhala umxholo osekwe kwimali iminyaka eliqela kwaye uneentlobo ngeentlobo zopapasho kwi-intanethi. Ngobunzima, uyakwazi ukucacisa izifundo ezintsonkothileyo ngendlela entsha.